धरहराले ४५ मिनेटसम्म थिचिएर बाँचेपछि …. - Nepal News - Latest News from Nepal
धरहराले ४५ मिनेटसम्म थिचिएर बाँचेपछि ….
मैले श्रीमतीलाई फोन गरेँ, अनि आफ्नो वास्तविकता सुनाएँ । घरमा रुवावासी शुरु भइहाल्यो । म बाँचे, अव चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर तत्काल घर आइहाल्छु भने । बल्ल होस आयो मेरो मोटरसाइकल खोई ? हेर्दा त पुरै पुरिएको रहेछ । मान्छे त बालबाल बाँचियो, मोटरसाइकलको के चिन्ता भनेर जतिसक्दो छिटो घर आउनका लागि हिडेँ । तर, सवारी साधान केही पाइएन ।
क्याबिनेट बैठककक्षमै सुते प्रधानमन्त्री
काठमाडौं छोड्दै सर्वाधारण, गाडी नपाएपछि हिँडेरै घरतिर